News and Articles from entire network of Kantipur Media Group in English and Nepali - entertainment - ekantipur
Saptahik तथ्य र सत्य
साप्ताहिक संवाददाता असार १, २०७६ १७:००
संसारकै सबैभन्दा महँगो मानिएको एउटा रिसोर्ट फिलिपिन्सको एउटा टापुमा सञ्चालनमा आएको छ । १५ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त रिसोर्टमा ६ वटा बेग्लाबेग्लै भिल्ला निर्माण गरिएका छन् । पूरा पढ्नुहोस् »
Saptahik मैदान बाहिर
साप्ताहिक संवाददाता असार १, २०७६ १६:००
भारतीय कप्तान विराट कोहली र महेन्द्रसिंह धोनीको व्यक्तित्व निकै फरक छ । अहिलेका कप्तान कोहलीलाई मैदानमा निकै आक्रामक मानिन्छ, जबकि धोनी मैदानमा शान्त देखिन्थे । पूरा पढ्नुहोस् »
राजाराम पौडेल असार १, २०७६ १४:००
यहाँ डिलक्स र स्विट गरी ३८ वटा कोठा उपलब्ध छन् जसमा एक रात गुजारेको ३ हजारदेखि ५ हजार ५ सयसम्म शुल्क लाग्छ । शान्त वातावरणमा अवस्थित यो होटलको आफ्नै रेस्टुराँ पनि छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता असार १, २०७६ १४:००
नारी संवाददाता असार १, २०७६ १३:२१
कृष्ण भट्टराई, अनिल श्रेष्ठ असार १, २०७६ १३:००
साप्ताहिक संवाददाता असार १, २०७६ १२:०७
नेपाली चलचित्र फ्लप हुनुको कारण स्क्रिप्ट दमदार नहुनु धेरैले कारण मान्दै आएका छन् । यसै सन्र्दभमा नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखन कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ ।आउँदो अगस्ट २१ देखि २७ सम्म मकवानपुरको इन्द्रसरोवर, कुन्साल र चित्लाङ मध्ये कुनै एक ठाउँमा स्क्रिप्ट लेखन कार्यशाला गरिने कार्यक्रम संयोजक केपी पाठकले जानकारी दिए । कार्यशालामा ६० जना भन्दा बढि व्यक्ती सहभागी हुन सक्ने उनले बताए । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता असार १, २०७६ १२:००
पप गायनमा लोकप्रिय भैरहेकै बेला उनलाई अहिले नेपाली चलचित्रले पनि सम्झिएको छ । गायक बज्राचार्य आफ्नो बिल्कुलै नयाँ सिर्जनामार्फत चलचित्र मारुनीमा सुनिएका छन् । दीपककै स्वर तथा संगीतको जाम न माया जाम.. गीतको भिडियो यसै साता सार्वजनिक भएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता असार १, २०७६ ११:४०
गायक प्राञ्जल पोखरेलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । आफ्नै शब्द रहेको गायक पाखेरेलको सार्वजनिक गीतमा सागर अधिकारीले संगीत भरेका छन् । भैरहवामा रहेर नेपाली गीत/संगीतमा रमाउँदै आएका गायक पोख्रेलको यो तेस्रो गीत हो । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता असार १, २०७६ १०:५२
जेष्ठ ३२, २०७६ १४:००
Saptahik पत्याउनु हुन्छ?
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३२, २०७६ १३:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३२, २०७६ १२:००
वान प्लसले आफ्नो नवीनतम संस्करण वानप्लस–७ प्रो नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ । प्रत्येक पलहरू खिच्न यसमा ट्रिपल क्यामेरा उपलब्ध छ, जसले क्यामेराको परिभाषा नै परिवर्तन गर्ने कम्पनीको दाबी छ । पूरा पढ्नुहोस् »
स्वस्तिक श्रेष्ठ जेष्ठ ३२, २०७६ १०:००
रुपन्देहीका साइक्लिस्टहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यका साथ राईड टु रानीमहल सम्पन्न गरेका छन् । साइकल सिटी बुटवल र रुपन्देही जिल्ला साईकल संघको आयोजनामा उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको हो । पूरा पढ्नुहोस् »
Saptahik यात्रा सन्दर्भ
किशोर नेपाल जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:००
एकातिर ईश्वरको स्वामित्वमा रहेका जग्गा निजी स्वामित्वमा दर्ता हुने अभियान चलिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सरकारको हकदावी नलाग्ने वातावरण बन्दै गएको छ । डेढ दशकअघि हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको थियो– नेपाल ट्रस्ट । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ १६:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ १५:५९
रामजी ज्ञवाली जेष्ठ ३१, २०७६ १५:५१
आश गुरुङ, विना थापा जेष्ठ ३१, २०७६ १४:००
लमजुङ हिमालदेखि निलगिरीसम्म अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाको भाग हो । हिमाल पारी र हिमाल वारीका ५ जिल्ला, साविक ५७ गाविसलाई समेटेर अन्नपूर्ण हिमालकै नामबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र गठन गरिएको हो । संघीय संरचनाअन्तर्गत अहिले गण्डकी प्रदेशको ५ जिल्ला, १५ गाउँपालिकाका तथा ८७ वडामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र फैलिएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ १३:००
ठमेलको टर्टल लाउन्ज एन्ड क्लबले आज शुक्रबार नेपाल आइडल सिजन—२ का फस्ट रनर्सअप गायक विक्रम बराललाई प्रस्तुत गर्दैछ । ऊक्त कार्यत्रममा विक्रम लाइभ ब्यान्ड सहित प्रस्तुत हुनेछन् । शुक्रबार साँझ ७ बजे प्रारम्भ हुने कार्यक्रम शनिबार बिहान ५ बजेसम्म चल्ने बताइएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ १२:००
गायक संजिव पराजुली र गायिका टीका प्रसांई युगल गायनमा चिनिएको नाम हो । उनै टीका र संजिवको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको उनीहरुको ‘जानी जानी एउटा गल्ती’ बोलको गीत अहिले लोकप्रिय बन्दै गएको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ ११:५१
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ ११:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ १०:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३१, २०७६ ०९:००
प्रदीप भारद्धाजको लेखन तथा योगेश घिमिरेको निर्देशनको यो चलचित्रमा प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज जोशी, हेमन्त बुढाथोकी, शिवशंकर रिजाल, उत्तम केसी, सन्जय न्यौपाने, श्रीकृष्ण लुइँटेल, विशाल खरेल आदि कलाकारले अभियन गरेका छन् । विशाल खरेलले यो चलचित्रबाट डेब्यु गर्दैछन् । पूरा पढ्नुहोस् »
रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष) जेष्ठ ३१, २०७६ ०८:००
पुँजी तथा मेहनतबाट नयाँ अवसर सिर्जना होला । तपाईंको गल्ती सच्याउने स्वाभावको प्रशंसा हुनेछ । सामाजिक हैसियत कायम राख्न जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । परिचित मित्रहरूबाटै प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्छ । कुनै पनि विषयमा तथ्य पत्ता नलगाई निर्णय नलिनुहोला । पूरा पढ्नुहोस् »
अधिकारी रवीन्द्र जेष्ठ ३०, २०७६ १८:००
विदेश जाँदै नजाने मजस्ता अक्कडेहरूले एउटा खुट्टा उचालेरै काठमाडौंलाई झेलेका छन्, जसलाई भित्रैदेखि काठमाडौं बस्न मन छैन र यो ठाउँ छोड्न हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि केही उपाय नलागेकाहरूको पनि एउटा खुट्टा उचालिएकै छन् । यहाँ घर बनाएर जहान–परिवार पाल्न सक्ने दूरदूरसम्म सम्भावना छैन, अनि दुर्दशापूर्ण कोठे जिन्दगी जीवनपर्यन्त भोग्न सकिँदैन भन्ने भय पनि छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३०, २०७६ १५:५९
कुम्भराज राई जेष्ठ ३०, २०७६ १४:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३०, २०७६ १२:३६
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३०, २०७६ १२:००
कुनै समय बलिउडका निर्माताहरूले नपत्याएपछि चलचित्रमा अभिनय गर्ने आफ्नो धोको पूरा गर्न दक्षिण भारतीय चलचित्रको सहारा लिएकी पञ्जाबी अभिनेत्री रकुलप्रित सिंहका दिन फर्किएका छन् । पूरा पढ्नुहोस् »
Saptahik मलाई मन पर्छ
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ ३०, २०७६ ११:०३
अभिनेता : विपिन कार्की गायक : सजनराज वैद्यनिर्देशक : दीपेन्द्र के खनाल पूरा पढ्नुहोस् »
मुख गन्हाउने समस्याबाट छुटकरा
डा. सुमनराज ताम्राकार जेष्ठ २९, २०७६ १६:००
कतिपयले मुख गन्हाउने समस्याबाट पीडित भै नमीठो अनुभव सँगालेको हुनुपर्छ । तपाईंले कुराकानी गर्दा नजिकै बसेको साथीले मुख खुम्च्याउन सक्छ । यो समस्याको नराम्रो पक्ष के हो भने आफूलाई आफ्नो मुख गन्हाइरहेको जानकारी नहुनसक्छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २९, २०७६ १२:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २९, २०७६ १०:५७
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २८, २०७६ १५:००
हिन्दी गीतमा उरुषा
नारी संवाददाता जेष्ठ २८, २०७६ १३:०२
मोडल तथा नृत्यांगना उरुषा पाण्डे यतिबेला मुम्बईमा छिन् । दुई वर्षअघिदेखि नेपालको रंगमञ्चमा नृत्यमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै आएकी पाण्डे मोडलिङमा पनि स्थापित छिन् । पूरा पढ्नुहोस् »
स्काउटले मानिसलाई मल्टिट्यालेन्ट बनाउँछ
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २८, २०७६ १३:००
प्राकृतिक विपत्ति आउँदा आफू कसरी बच्ने र अरुलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा स्काउटमा लागेपछि थाहा हुन्छ । विगतमा भएका भुकम्प, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा सबैभन्दा पहिले स्काउट नै पुगेको थियो । स्काउटले युवाहरूलाई कुलतमा फस्न नदिन, फसिसकेकाहरूलाई पनि सहि मार्गमा ल्याउन सहयोग गर्छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २८, २०७६ १२:००
नेपाली सुगम संगीतका लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकालको आवाजमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा माधव ढकालको शब्द तथा गैरे सुरेशको संगीत रहेको छ । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २८, २०७६ ११:४८
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २८, २०७६ ११:३७
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २८, २०७६ १०:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २७, २०७६ १६:००
सारा सिर्पाइली केही समयअघि अनमोल केसीसँगको प्रेम सम्बन्धमा छिन् भन्ने कुराले चर्चामा आएकी थिइन् । अनमोलले उक्त कुरा अस्वीकार गरेपछि अहिले त्यसको चर्चा हुन छाडेको छ । यद्यपि साराको गतिविधि हेर्ने हो भने उनी कसैको प्रेममा छिन् भन्ने छनक मिल्छ । पूरा पढ्नुहोस् »
चर्चामा सिन्धु मल्लको पिरतीको जाल
नारी संवाददाता जेष्ठ २७, २०७६ १४:२६
गायिका सिन्धु मल्ल नयाँ गीत पिरतीको जाल सहित बजारमा आएकी छिन् । लोकप्रिय गायिका मल्ललाई गायनमा यस पटक गायक अमित बरालले साथ दिएका छन् । अमित सिङ्गिङ् रियालिटी शो नेपाल आईडल मार्फत सांगीतक क्षेत्रमा आएका गायक हुन् । पूरा पढ्नुहोस् »
अनिल श्रेष्ठ जेष्ठ २७, २०७६ १४:००
बेहुली पक्षसँग उनले अपेक्षा गरेअनुसारको तिलक (दाइजो) देखेनन् । तिलक नदिएको झोकमा बेहुला रिसले रन्थनिए । त्यसपछि बेहुला राजवंशी मण्डपबाट उठे । बधु पक्षले बेहुला किन मण्डपबाट उठे भन्ने जिज्ञासा राखेपछि बेहुला लक्ष्मणले डेढ तोलाको सुनको सिक्री दिए मात्र बेहुली लिएर फर्कने कुरा बताए । पूरा पढ्नुहोस् »
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २७, २०७६ १३:२८
प्रकाश बराल जेष्ठ २७, २०७६ १३:००
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २७, २०७६ ११:४७
साप्ताहिक संवाददाता जेष्ठ २७, २०७६ १०:००
शुक्रबारदेखि सलमान खानको बहुचर्चित चलचित्र भारत प्रदर्शनमा आउँदैछ । आफ्ना चलचित्र इस्लामिक चाड इदका अवसरमा प्रदर्शन गर्दै आएका सलमान खान यसबीच आफूसँग सम्बन्धित थुप्रै समाचारका कारण चर्चामा छन् । पूरा पढ्नुहोस् »
हरिहरसिंह राठौर जेष्ठ २७, २०७६ ०९:००
सन् १८४९ मा ब्रिटिस सर्बे अफ इन्डियाले सर्वेक्षण गरी विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने अग्लो शिखर भनी चिनिएको भए पनि त्यहाँका मानिसलाई त्यसको कुनै जानकारी थिएन । पूरा पढ्नुहोस् »